သင့် iPhone ၏ IMEI ကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
သင့် iPhone ၏ IMEI ကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
ပါပလော Aparicio | | iPhone ကို, iTunes က, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ (သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏) မိုဘိုင်းစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသိရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါအတွက်ဘလော့ဂ်ကို Actualidad iPhone လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးရင်ငါတို့သိဖို့လိုတယ် ဒီအိုင်ဖုန်းရဲ့ IMEI ဆိုတာဘာလဲ။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆိုရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းအပြင် Apple က၎င်းကုဒ်ကိုနည်းလမ်း ၅ မျိုးဖြင့်ရှာဖွေခွင့်ပြုသည်။
IMEI ကုဒ်မှာပါဝင်သည် 15 ဂဏန်းစုစုပေါင်းတစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲကွာနေသောကိန်းဂဏန်းများသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုကောင်းအောင်ကူးယူရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ IMEI နံပါတ်ပါသောကိန်းဂဏန်းများကို အသုံးပြု၍ ရရှိသည် Luhn algorithm ကိုသိပ္ပံပညာရှင် Hans Peter Luhn မှဖန်တီးပြီး၎င်းသည်မိုဘိုင်းကိရိယာတွင်ကဲ့သို့အချို့သောအလတ်စားနေရာများတွင်၎င်းကိုမိတ်ဆက်သောအခါလူ့အမှားများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဤအရေးကြီးသောကုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိနိုင်သောသံသယများကိုရှင်းလင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမည်။
1 IMEI ဆိုတာဘာလဲ။
2 ကျွန်ုပ်၏ iPhone ၏ IMEI ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
2.1 setting ထဲကနေ
2.4 box ထဲမှာကကြည့်ရှု
2.5 iTunes မှ
3 iPhone ကို IMEI ကဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
4 IMEI က iPhone ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
5 အိုင်ဖုန်း၏ IMEI ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။
လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်လိုင်စင်ပြားရှိပါကထိုလိုင်စင်ပြားသည်သင်၏ IMEI ဖြစ်သည်။ ကုဒ် ဖုန်း၏ IMEI (အင်္ဂလိပ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းစနစ်ပစ္စည်းကိရိယာ) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်စက်ကိရိယာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်ကုဒ်နှင့်၎င်းကိုချိတ်ဆက်သောအခါ device မှကွန်ယက်သို့ပို့သည်။ ဒီကုဒ်သည်ပစ္စည်းကိုအဝေးမှသော့ခတ်ရန်ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ရပ်တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်သူခိုးသည်သူမသုံးနိုင်သည့်စက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ၏ IMEI ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
IMEI ကိုရှာရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ iPhone settings မှဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုငါတို့သွားလိမ့်မယ် ဆက်တင်များ / အထွေထွေ / သတင်းအချက်အလက် ငါတို့ဆင်း scroll ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ IMEI ကို Bluetooth လိပ်စာအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည် (iOS 8.4.1 တွင်)
IMEI ကိုရှာပါ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားအားသာချက်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းကစားပါက၎င်းကိုကူးယူလိုသည့်နေရာတိုင်းတွင်ကူးယူကူးယူနိုင်သည်။
ဤနည်းလမ်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည် အခြားမည်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်မဆိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒါကိုလုပ်ပြီးရင်မှတ်မိရင် iPhone ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ IMEI ကိုကိန်းဂဏန်းကီးဘုတ်မှရှာဖွေရန်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ငါတို့ရိုက်တယ် * # 06 #။ နံပါတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ရိုးရှင်းပေမယ့်ထိရောက်သော။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ၏ IMEI ကိုသိလိုလျှင်၊ ကျနော်တို့ကလှည့်နှင့်သေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်ကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်iPhone ပြောတဲ့စာသားအောက်မှာပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှားသည်ဟုထင်လျှင်အမှုပြောင်းလဲသွားသည်ဟုလည်းကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် iPhone သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အမြဲတမ်းရှိနေသည်ဟုမသေချာပါကဤနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှုနည်းသွားနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ box ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်ပေမယ့် iPhone ရဲ့ IMEI ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့နိုင်တဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှာရှေ့မှာမရှိဘူးဆိုရင်။ ရုံ၏ဘေးထွက်အပေါ်စတစ်ကာများကိုကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုဒ်ထွက်ရှာရန် box ကိုအောက်မှာ။
နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IMEI ကို iTunes မှရှာပါ။ ဤနည်းလမ်းသည်၎င်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုရွေ့လျားမှုတွင်တွေ့မြင်ရပြီး၎င်းကိုညွှန်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရှိတော့သောကြောင့်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ iTunes မှကျွန်ုပ်တို့၏ကုဒ်များကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
သော့နှင့်အတူ CONTROL နှိပ်ကျနော်တို့ menu ကိုသွားပါ iTunes / iTunes အကြောင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ဒေတာများပေါ်လာပြီး၎င်းတို့ထဲတွင် IMEI ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
သတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဒီကုဒ်သည်သင်၏စက်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည် IMEI ကိုမည်သူ့ကိုမျှပေးရန်မလိုအပ်ပါ ကတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောမဟုတ်လျှင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုလူမှုရေးကွန်ရက်တွေမှာဘယ်တော့မှမထုတ်ပြန်ရဘူး။
iPhone ကို IMEI ကဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
အသုံးပြုသူများသည်မလုပ်နိူင်ပါ ဖုန်းကို IMEI မှသော့ခတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာအားအကူအညီတောင်းခံရပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ပြုရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့ချင်သော device ၏ IMEI ကိုရှာရန်လိုသည်။ တယ်လီဖုန်းမသုံးနိုင်လျှင် IMEI ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။ ကောင်းပြီကံကောင်းတာကဒီဆောင်းပါးမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ iPhone ရဲ့ IMEI ကိုသိဖို့နည်းလမ်းတစ်မျိုးကရှင်းပြတယ်။ ဤနည်းသည်နံပါတ် (၄) ဖြစ်သည်။ box ကိုရှာပြီးအောက်ခြေရှိစတစ်ကာကိုကြည့်ရပေမည်။
IMEI မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ အော်ပရေတာကိုခေါ်ပါ နှင့်ငါတို့ဖုန်းကိုသော့ခတ်ရန်သင့်အားမေးကြည့်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမေးခွန်းများမေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့လိုသည့် iPhone ၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြောင်းသေချာပါသည်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကပိတ်ဆို့လိုသည့်ပစ္စည်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါကပြaနာမဟုတ်ပါ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တည်ဆဲ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို IMEI မှသော့ခတ်ခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးစားသူနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဒီဟာကငါတို့သွားဖို့လုံလောက်တယ် icloud.com သို့မဟုတ်အခြား application ကို iOS စက်မှရယူနိုင်သည်။ အတွင်းထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကိုပျောက်ဆုံးသွားအောင်ပြုပြင်လို့ရတယ်၊ သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုထပ်ထည့်ပါ၊ ပိတ်ထားမယ်၊ အကောင်းဆုံးမှာသံသယမရှိဘဲဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုထည့်ပါ။ သတင်းစကားကိုအလွန်သတိထားပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှခိုးယူခံရပြီးလွှင့်ပစ်ခြင်း၊ ချိုးဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းတရားကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အရာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသိနိုင်ခြင်းကြောင့်ရန်လိုခြင်းလည်းမဖြစ်သင့်ပါ။ ငါကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုထားလိမ့်မယ် "မင်္ဂလာပါ, သင်၌ငါ့ဖုန်းရှိသည်။ ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်နေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ပြီးတော့သူဘယ်မှာလဲဆိုတာသူ့ကိုပြောပြပါ။
မြည်အောင်လုပ်ပါ "သောကြောင့်?" သင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်၊ အဖြေမှာ၎င်းတွင်ရှိသူမည်သူမဆိုမသိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားကြည့်ရတာမိုက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပြိုင်ပွဲမှာငါ့ညီအိုင်ပက်ကိုယူပြီးသူကသူ့လိုပဲ၊ ငါ့ညီကငါ့ကိုခေါ်တယ်၊ ငါကွင်းဆက်လုပ်လိုက်တယ်။ ယူသူက iPad လို့မှားယွင်းစွာယူမှတ်ခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်းသူပြန်လာပြီးသူအမှားမှားယွင်းမှုကြောင့်ယူခဲ့သူကိုစွန့်ခွာသွားသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ရှိသူမည်သူမဆိုသိပြီးဖြစ်သည် မင်းမှာမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်၊။ သင်က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်ပို့ပြီးစက်ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ IMEI မှပိတ်ဆို့လိုက်လျှင်၎င်းသည်ပိုင်ရှင်ဆီသို့ပြန်သွားလျှင်ပင်အိုင်ဖုန်းသည်စက္ကူအလေးချိန်ကောင်းလာလိမ့်မည်။
IMEI က iPhone ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
အော်ပရေတာတစ် ဦး လျှင်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်လိုသည်မှာနည်းနေသော်လည်းဤအလေ့အကျင့်သည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူပိုများလာပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဖုန်းနံပါတ်ထက်ဖုန်းကိုသာ ၀ ယ်လိုကြသည်။ အဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုက်ဆံပိုပေးကြသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းအားလုံးလိုလိုလည်းမှန်သည် ငွေကြေးအော်ပရေတာတစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်အော်ပရေတာကိုအားထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်း ၀ ယ်ရန်ငွေအလုံအလောက်မရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ်အလွန်အရေးကြီးသောအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သရွေ့ကောင်းသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားဖုန်းများများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက် သူတို့သည်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အော်ပရေတာကဒ်တစ်ခုဖြင့်သာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဖြန့်ချိမဟုတ်လျှင်။ IMEI က device ကိုသော့ခတ်တာနဲ့အမျှ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ဖို့အတွက်လည်း third party တွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် သင့်ကို iPhone News မှာကမ်းလှမ်းပါတယ် ၎င်းမှာ LiberaiPhoneIMEI ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအိမ်မှာရှာကြလိမ့်မည်အလွန်မှန်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီမှာနှင့် Patagonia, ဒါပေမယ့်လည်းအိုင်ဖုန်းသော့ဖွင့်ဖို့အသုံးအများဆုံးစျေးနှုန်း€ 9.95 ဖြစ်ပြီး, ဒီမှာကျနော်တို့ကစျေးနှုန်းချိုသာယူရို3option ကိုရှိသည်လည်းမှန်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လွှတ်ပေးရန်လက်ခံရရှိရန်3နာရီခန့်စောင့်ဆိုင်းစိတ်ထဲမထားဘူးအဖြစ်။
နှင့်အတူ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန် ဖုန်းIMEI ကို ထုတ်ဝေပါ။ IMEI ကိုသက်ဆိုင်ရာအကွက်ထဲတွင်ရိုက်ထည့်ပြီး PayPal ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ငွေပေးချေရန် PayPal အကောင့်သို့ပို့ဆောင်ပေးရပါမည်။ သော့ဖွင့်ခြင်းသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အနည်းဆုံးယူရို ၆.၉၅ ဖြင့်အနိမ့်ဆုံး ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါကထိုနှုန်းဖြင့်ဖော်ပြသည့်သုံးနာရီအကြာအထိယင်းကိုမေ့ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သုံးနာရီကြာပြီးနောက်အော်ပရေတာအသစ်၏ကဒ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည်အလုပ်လုပ်ပုံကိုစစ်ဆေးသည် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆင်းမ်ကဒ်, ဒါကြောင့်ငါတို့ကလုံးဝအခမဲ့ပြီးသားကြောင်းကိုငါတို့သိရကြလိမ့်မည်
အိုင်ဖုန်း၏ IMEI ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Windows ၏ဗားရှင်းအဟောင်း။ IMEI ကိုဖုန်းဘာကြောင့်ပြောင်းချင်တာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ပြီးပါကဤကုဒ်ကိုပြောင်းလဲလိုပေမည် အဟောင်း၏အိုင်ဖုန်း နိုင်ငံခြားမှာပါ၊ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာမမှန်ကန်သောနံပါတ်နဲ့တစ်ခုခုဝယ်လို့ရလို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့ iPhone ကကျွန်တော်တို့ကိုပြgiveနာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် "အလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းကိုမထိပါနှင့်" ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်။
အိုင်ဖုန်းတစ်ခုရဲ့ IMEI ကိုပြောင်းလိုက်ပါ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ZiPhone။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ZiPhone ကို download လုပ်တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင် download လုပ်ထားသော file ကို unzip လုပ်ပြီး desktop ပေါ်တွင်ထားလိုက်ပါ။
Windows Start ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ Run ကိုဖွင့်ပြီး“ cmd” ကိုကိုးကားပါ။
ငါတို့ကcd desktop / ziphone”, ကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ, ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌နှင့် Enter ကိုနှိပ်ပါ။
ဖုန်းကို DFU စနစ်နဲ့ထားတယ်။ ၎င်းအတွက် Apple logo ကိုတွေ့သည်အထိ power ခလုတ်နှင့် home ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး power ခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး home ခလုတ်ကို cable နှင့်အတူ iTunes logo မတွေ့မချင်းကိုင်ထားသည်။
command Ziphone တွင် "Ziphone -u -ia 123456789012345" (ကိုးကားချက်များမရှိပဲ) ရေးသည်။ အရင်ကုဒ်မှာလိုချင်တဲ့ IMEI နံပါတ်တွေပြောင်းရလိမ့်မယ်။
ပရိုဂရမ်ကို zibri.tad ဖိုင်ကိုရှာပြီး restart လုပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ IMEI သစ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iTunes က » သင့် iPhone ၏ IMEI ကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
အကယ်၍ SIM ကဒ်ကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်အကွက်ကိုသင်ဖယ်ရှားပါက IMEI နှင့်သင်၏အိုင်ဖုန်း၏နံပါတ်နံပါတ်ကိုရွှေဖြင့်ထွင်းထားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
helloz သည် IPHONE4 အတွက်သင်၏အဖြေသည်မှန်ကန်သည်
မင်္ဂလာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က iphone ကိုအနုတ်လက္ခဏာ band ထဲကဘယ်လိုထုတ်ယူရမလဲ။ သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်သင်အနှုတ်လက္ခဏာတီးဝိုင်းမှထွက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသင်သိပါသလား။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗန်းပေါ်ရှိ imei ကမှန်မမှန်ကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းတဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့မှာ iphone5ရှိတယ်၊ ဖုန်း # * # # # ကိုဖုန်းကို hack လုပ်ထားလား၊ ဖုန်းရဲ့ပုံမှန် IMEI နံပါတ်အစား 06 ကိုပြသည်။ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြလို့ရမလား
José Luis Rozas ကိုပြန်ပြောပါ
ပါပလော Garcia Lloria ဟုသူကပြောသည်
လ၏ Chorrapost ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ပါပလောGarcía Lloria ကိုစာပြန်ပါ
Edwin Azocar, G ဟုသူကပြောသည်
ဖုန်းတော်တော်များများမှာကျောဘက်မှာ imei ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ # # 06 # ကိုသုံးဖို့အကြံပေးချင်တယ်၊ ဤနည်းအားဖြင့်စက်၏အစစ်အမှန်ကိုသိခြင်းသည် ပို၍ လုံခြုံသည်။
Edwin Azocar, G တုံ့ပြန်ပါ
Javier Camacho နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
SIM ကဒ်အကွက်ထဲတွင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါက ...
Javier Camacho အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းပျောက်ပြီးကျွန်ုပ်သေတ္တာမရှိပါကကျွန်ုပ်၏ imei ကိုမည်သို့မြင်နိုင်သနည်း။ ကူညီကြပါ
မာရီယာ Ariza ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် IMEI နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်အခိုးခံရလျှင်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ IMEI ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်ပြီးဖုန်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
María Ariza ကိုပြန်ပြောပါ
သို့မဟုတ်ပါကပိတ်ဆို့ထားသော ipad ၏ imei ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။